Igumbi lokulala eli-4 leVilla eMont-Ste-Anne ene-AC V22 - I-Airbnb
Igumbi lokulala eli-4 leVilla eMont-Ste-Anne ene-AC V22
Indlu enendawo yokuphola enamagumbi okulala ayi-4 nenendawo ENTLE yokubuka iMont-Ste-Anne ski resort. Vula indawo yokuhlala/yokutyela enekhitshi nendawo yokubasa umlilo. Ipuli engaphakathi nebhafu enamanzi ashushu. Ilungele indawo yokuhlala ngexesha lokutyelela kwakho kummandla waseQuebec!
Yiza nenja yakho eholideyini. ($) (Kukho ezinye iimali ezimele zibhatalwe, jonga imithetho yethu yekhaya
) Faka iintsuku uze wonge ngakumbi!
I-Villas Mont Sainte-Anne, amagumbi okulala amane, abekwe ecaleni kwebala legalufa lase-St-Ferreol kwaye ziikhilomitha eziyi-0.5 kuphela ukusuka eMont-Sainte-Anne; banikezela ngeyona mbono ilungileyo intaba. Ngaphakathi uya kufumana indawo enkulu yokutyela / indawo yokuhlala enendawo yomlilo epholileyo, umoya womoya, ikhitshi elibandakanya i-dishwasher, i-microwave kunye nezixhobo.
Uya kufumana amagumbi okulala amabini anebhedi enkulu yokumkanikazi lilinye, igumbi elinye elineebhedi ezimbini ezingatshatanga kunye negumbi elinye elikhulu elinamagumbi amabini okulala kunye nebhedi enye. Igumbi lokuhlambela elinye eligcweleyo kumgangatho omkhulu, igumbi lokuhlambela elinye elisezantsi elineshawa kunye newasha / isomisi. Imigangatho eyanyisiweyo.
Eyokuzonwabisa kwakho; a 46" flatscreen HD TV nge digital Illico terminal, umabonakude wesibini nge digital Illico terminal, ukufikelela WiFi simahla kunye yokupaka. Ehlotyeni kuphela, ukufikelela iitafile zepikiniki ekwabelwana kunye BBQ kwi balcony yabucala.
Ukulala ukuya kutsho kubantu abali-10.
Yongeza ubusuku kwaye ugcine ngaphezulu!
Siya kuvuya ngakumbi ukukunceda ngokuhlala kwakho ngayo nayiphi na indlela esinokuyenza ngayo.